30zọ XNUMX iji kwalite Blog gị
Tuesday, October 23, 2012 Tuesday, October 23, 2012 Douglas Karr
Anyị na-agwa ndị ahịa anyị mgbe niile na o zughi ide ederede blọgụ. Ozugbo edere post gị, ị ga-agwa ndị na-ege ntị lekwasịrị anya na ọ nọ ebe ahụ accomp enwere ike mezuo ya site na ibipụta ntinye na Twitter, na Facebook, iziga ya na saịtị ndị ọzọ, izipu ndị nnata email gị, ma nyefee ya na ntinye akwụkwọ mmekọrịta. saịtị n'ebe niile. Imirikiti ndị mmadụ anaghị alaghachi na saịtị kwa ụbọchị ma ole na ole ga-denye aha na ndepụta gị. Ọtụtụ ndị na-adabere na usoro mmekọrịta mmekọrịta ha. Yabụ… ọ bụrụ n'ịchọrọ ka achọta ọdịnaya gị, ekwesịrị ịtụle ọdịnaya gị n'ime netwọkụ ndị ahụ!
Nke a bụ ụzọ 30 iji kwalite mgbasa ozi blog gị na iji mee ka ọtụtụ okporo ụzọ gaa na blọọgụ gị Mwepụta Too Ọyụ.
Tags: nkwalite blogịde blọgụnkwalite ọdịnayaụlọ ọrụ ịde blọgụ
Ọdịnihu nke mmekọrịta mmadụ na ibe bụ Ọdịnihu nke Ahịa
Ọkt 23, 2012 na 12:25 PM
Daalụ nke ukwuu maka ịkekọrịta nke a!
Ọkt 23, 2012 na 4:09 PM
Nnukwu infographic, @andreealaunchgrowjoycom: disqus! Nkwalite bụ isi ihe na usoro ọ bụla.
Ntuziaka Guru Frugal
Apr 28, 2013 na 1: 03 PM
Ọtụtụ n'ime ndị a na-emegide TOS nke saịtị mgbasa ozi mmekọrịta, ndị ọzọ ga-eme ka Google taa gị ahụhụ.
Apr 29, 2013 na 3: 58 AM
Iji forums bụ ụzọ dị mma iji mụta, kesaa, ma kwalite n'otu oge! Naanị cheta ibipụta ihe kachasị mma gị na saịtị nke gị tupu ebe ọ bụla ọzọ.
Dee 14, 2015 na 5: 41 AM
Mbọn na-arụ ọrụ kachasị na ịga nke ọma nke blog. Mgbasa mgbasa ozi na-enyere ọtụtụ aka na mbọn.
Jenụwarị 18, 2016 na 1:32 PM
Daalụ maka ndị dị otú ahụ a zuru ezu infographic. Mgbasa mgbasa ozi, onye nkwalite doro anya!
Apr 11, 2016 na 4: 55 AM
N'ezie, nnukwu post gbasara nkwalite blog.
Iji na-agba ọsọ a blog nke ọma, Anyị kwesịrị inwe ụfọdụ ndị na-agụ mgbe niile ma nweta ndị na-agụ ya oge niile, Anyị kwesịrị ịkwalite blọọgụ anyị mgbe niile.
Nkwalite Blog dị ezigbo mkpa n'oge a. Anyị kwesịrị inwe ikike iji dọta ndị na - agụ ya.
Enwere m mmasị n'ụzọ blog pormotion ị kọwara ebe a ma ekwenyere m kpamkpam. Site na isoro usoro ndị a, Anyị nwere ike ịchụpụ ndị na - agụ akwụkwọ oge niile na blọọgụ anyị.
Dị ka m na-eche, iji nweta ndị na-agụ akwụkwọ na-eguzosi ike n'ihe mgbe niile, Anyị ga-ede ogo dị elu ma na-etinye ọdịnaya n'ihi na ọdịnaya bụ naanị ihe nwere ike ịdọta ndị na-agụ akwụkwọ site na isi mmalite dị iche iche ma ọ bụ mgbasa ozi mmekọrịta ma ọ bụ ozi ịntanetị Ọdịnaya kwesịrị inwe ikike iji dọta ndị na-agụ ya.
Tinyere ebe ndị a, ndị otu Facebook nwekwara nnukwu ike. Anyị nwere ike ịchụpụ nnukwu okporo ụzọ na ndị na-agụ akwụkwọ sitere na otu ndị a Ọ bụrụ na anyị edeela ọdịnaya dị egwu.
Obi dị m ụtọ na ị kpuchiela ọmarịcha edemede. Daalụ maka ịkekọrịta so anyị. 😀